C/shakuur Cali Mire oo ku guuleystay kursiga ugu dambeeyay ee beesha Mareexaan ku leedahay Aqalka hoose – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/shakuur Cali Mire oo ku guuleystay kursiga ugu dambeeyay ee beesha Mareexaan ku leedahay Aqalka hoose
Wararka ugu dambeeyay aynu ka heleyno magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in kursigii ugu danbeeyay ee beesha Mareexaan uga mid noqonaya Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya maanta lagu doortay magaaladaas.
C/shakuur Cali Mire oo ah wasiir ku-xigeenkii warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegayaa inuu ku guuleystay 49 cod, wuxuuna doorashada kula tartamaayay musharixa kale C/risaaq Cali Jaamac oo isna helay 2 cod oo kaliya.
Tirada xildhibaan ee ilaa iyo haatan lagu doortay magaalada Cadaado ayaa gaaraysa 35 xildhibaan, iyadoo halka xildhibaan ee harsan oo ah beesha Absuge la sheegay in loo wareejin doono magaalada Muqdisho.
Maamulka Galmudug ayaa haatan u muuqda mid soo gaba-gabeeyay doorashada Aqalka hoose, iyo tan sare, waxaana hore doorashada xildhibaanada labada gole usoo gaba-gabeeyay maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed.
Waxaa weli harsan dhameystirka xildhibaanada Aqalka hoose ee ka imaanaya deegaanada Puntland oo lagu dooranayo magaalada Garoowe iyo kuwa gobolada waqooyi ee Somaliland oo iyana lagu dooranayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.